Bandy sy rôla sa polisy sy volera? – Malag@sy Miray
Hita sy tsapa izao fa dia ohatra ny milalao ireo hery samihafa misy eto Antananarivo. Mampahatsiahy ireo kilalao fanao fahiny. Misy karazany telo izy ireo :
1. Misy aloha ny Polisy sa volera :Raha ampitahaina amin’ity lalao iray ity ny zava-misy dia hita fa hatramin’ny 26 janoary lasa teo dia ny tarik’andriamatoa filoham-pirenena Marc Ravalomanana no volera. Dia nifanenjehina, tsy tratra… ao anaty « but » vao hita. Nopotehina ny fitaovany sy ny fanànany mba handemena sy ivoahany ka indrisy fa voa izy dia nifamadika indray ny lalao ka lasa ny antokon’olona tarihin’andriamatoa filohan’ny HAT Andry Rajoelina indray no lasa volera ka avy aty amin-dRavalomanana ny polisy.
2. Nisy lalao faharoa nipoitra avy eo : Bandy sy rôla. Nanomboka ny faha 28n’ny volana janoary dia nihitatra ho lasa bandy sy rôla ny lalao ka « gain! gain! » indray no niampy ilay « azoko ialahy! » Nivoaka ny EmmoNat. Lasa nisy mpandromba feno ny tanàna tsinona, hono. Ka tsy maintsy samborina ny olon-dratsy.Bandy sy rôla nifangaro polisy sy volera ny lalao teto izany.
3. Nihitatra ihany ny lalao ka lasa nisy « jeu d’échecs » indray teto Madagasikara:Mila vonoina, na samborina na ho anina ny mpanjaka izay vao lazaina hoe mandresy. Ka samy nisafidy ny lokony ny mpilalao. Tsy fotsy na mainty intsony no nampiasaina fa « fluo »volon-doranjy « fluo » ny andaniny ary mavo « fluo » kosa ny ankilany. Efa moderna ery izany lalao izany satria rehefa tsy hazo, tsy vy na koa fitaratra no nampiasaina dia lasa loko moderna « fluo » indray izany izao no lamaody.
Amin’ny lalao « échecs » toy itony moa dia misy foana ny toerana raisin’ny tsirairay. Ny mpanjaka amin’ny andaniny sy ny ankilany aloha dia efa mazava fa i Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana.Ny « pions » izay ampiasaina dia maro, misy ny TGV, ny Wisa, ny ambany tanàna, ny M.T.S sy ny T.T.S, sns ho an’ny andaniny ary Mpandàla ny ara-dalàna, O.Ba.Ma, Wusu, Tae-Kwon Do, sns ny ankilany.Ny « dame » dia Minisitra Ivohasina Razafimahefa ny ilany ary Praiminisitra Monja Roindefo ny ilany.
Ireo mantsy izao no tena afaka mandeha amin’izay làlana tiany haleha amin’ny fomba rehetra ka rehefa.
Ny « tour » dia tazana ao amin’ny kaominina ao. Ny andaniny misy an-dRatsivalaka Michèlle ary ny ankilany ny PDS Guy Rivo Randrianarisoa. Samy tsy maintsy mandeha amin’ny lalana mahitsy izy ireo mba handresena sy hihinanana ny fahavalo ary indrindra indrindra hiarovana ny « roi » isanisany.
Ny « cheval » izay tsy dia hita loatra izay tena halehany fa dia mivilivily etsy sy eroa dia azo ampitahaina amin’ny ataon’ny minisitra teo aleo Ranjivason Jean Théodore sy Jeneraly Ramakavelo ny andaniny avy amin’ny « tetezamita » ary ny praiministra Charles Rabemananjara sy ny filohan’ny Antenimieran-doholona Yvan Randriasandratriniony no toa mitàna izany toerana izany. Hita mantsy fa mandingandingana tsy dia tena hita mazava izay alehan’izy ireo amin’ity karazan-dalao ity.
Ny « fou » dia maro fa ny tena miavaka no tazomintsika. Ny an’ny TGV ohatra izao dia i Sareraka sy Rolly Mercia ohatra no mitazona izany andraikitra izany. Ny an-dRavalomanana kosa dia i Moxe Ramandimbilahatra sy iza re e? ohatra ny tsy dia hita hoe iza ohatra no apetraka eto.Raikitra ny lalao, tsy asiantsika fampitahana izay zavatra nampalahelo nitranga. Fa ny nahatonga ireny dia ny fandranitana sy ny fampirisihina ny tsy ampy saina ka dia niroboka nanao lalao maloto ka nanimba zavatra maro teto amin’ny firenena.
Ary tena tsy nijanona, bandy sy rôla na polisy sy volera ilay izy fa lasa nivadika fangala-piery na « cache-cache » kapoaka. Saingy maro no boka ary maro koa no tadiavina. toa ohatra ny mivadika ho lalao maloto no iafaran’ny tantaram-pirenena ka rehefa tapitra ny « partie » 1972 dia nisy indray ny partie « 1991 ». Tsy nahazo lesona tamin’ireny dia niverina ny partie « 2002 » ary naka « revanche » indray ireo resy tamin’io « partie » io rehefa raikitra ity partie « 2009 » ity. Dia iza no ho resy? Dia iza no handefitra? dia iza no babo? Raharaha izy ity, ry leretsy a!
elabe le match ry mitiyu – efa mitady ho monamonaina ny mpijery fa ny bandy tsy mety azo babo fa toa tsy dia enjehina loatra fa mahazo mi-circuler librement, ny rôla tsy mety maharesy fa toa miaiky heloka indray aza. Ny tour vao napetraky ny andaniny lasa niaps – nanao abandon de poste. Ny boka sy ny enjehina mifangaro saritaka. Sahirana be ny mpijery hoe iza no inona. Toa samy midongy ho bandy dia samy midongy ho rôla, dia samy miezaka ho polisy dia samy miezaka ho volera – fanina aho eeeeee !
15 mars 2009 à 10:34
Tena enga anie tsy hisy intsony rà hilatsaka ka hiadana finaritra ity Madagasikarantsika araka ny hira.
Ny lalao tokony hisy eto an-tanindrazana dia ny lalao madio, lalao mendrika tsy hisy faty olona tsy misy fandatsahan-drà ary manaraka ny lalàna ifampifehezana.
Tsy lalao tsy misy fepetra sy lalàna izany e!